हरेक वर्षको फेब्रुअरी १४ मा संसारका विभिन्न भागमा प्रणय दिवस अर्थात् भ्यालेन्टाइन डे मनाइन्छ । विश्वव्यापीकरणको प्रभावसँगै केही वर्षयता यो दिवस नेपालमा पनि भित्रिएको छ । विशेषगरी युवापुस्ताले यसको अनुशरण गरेको पाइएको छ ।
राज्य सञ्चालन व्यवस्थाप्रति व्यंग्य गर्दै विवेकशील साझा पार्टीका युवायुवतीले प्रणय दिवस (भ्यालेन्टाइन डे) मनाएका छन् । ललितपुरको कृष्ण मन्दिर प्राङ्गणमा आइतबार उपस्थित विवेकशील साझा पार्टीका युवायुवतीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई विधिविधानअनुसार चल्न पनि सचेत गराए ।
विवेकशील साझाको 'माया त माया हो' (फोटो फिचर)
प्रणय दिवसमा महिला पुरूषको मात्र होइन लैगिङ्ग अल्पसंख्यकको मायालाई पनि सम्मान गरौं भन्दै युवाहरुले कृष्ण मन्दिरको प्राङगणमा सांगितिक प्रस्तुती र कविता वाचन गरिएको हो।
केपी ओलीलाई होइन विधिको शासनलाई 'आइ लभ यु'
प्रदीप र सरस्वतीको जीवनमा क्षितिज अपूर्व प्रेमको हिस्सा बनेकी छन् । निस्सा बनेकी छन् । क्षितिजको अवस्था अस्वाभाविक छ । हिँड्डुल गर्न सक्दिनन् । बोलचाल गर्न सक्दिनन् । ज्ञवाली दम्पतीको अथक मिहेनत र प्रेमले उनले मुस्किलले आठ–नौवटा कुरा बुझ्न र प्रतिक्रिया जनाउन सक्छिन् ।
प्रदीप–सरस्वतीको प्रेमको निशानी
सुनील ज्यादै कम बोल्छन् । निशा पनि यही मान्छिन् । सुनीलले तारिफमा खासै शब्द नखर्चने निशाको गुनासो छ । सुनील आफ्नो मनको कुराहरु त्यति खुलेर पोख्दैनन् । किनभने, उनी मुखले बोल्नुभन्दा हाउभाउ र अन्य कुराले बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरामा विश्वास राख्छन्।
आज माया गर्ने जोडीहरुका लागि उत्सवको दिन । अर्थात प्रणय दिवस । माया साटासाट गर्ने दिन । धेरैका धेरै ‘प्लान’हरु होलान् आजलाई । त्यसो भए सामाजिक अभियन्ता तथा कलाकारद्वय धुर्मुस–सुन्तली (सीताराम कट्टेल–कुञ्जना घिमिरे)को योजना के छ ?
रंगशालामा २१३ जनासँग भ्यालेन्टाइन डे मनाउँदै धुर्मुस–सुन्तली
उसको नाउँ त रमा हो, तर म उसलाई सूर्यमुखी भनेर नै बोलाउँथेँ। हाम्रो पहिलो भेटा एउटा नाट्यशालामा भएको थियो र छुटानाम पनि नाट्यशालाबाट नै। अचेल सूर्यमुखी मलाई देखेर पनि देख्दिन, चिनेर पनि चिन्दिन। तर मभित्र भने रही-रही एउटा सूर्यमुखी फक्रिन्छ-ओइलिन्छ-झर्छ, फक्रिन्छ-ओइलिन्छ-झर्छ। कहिलेकाहीँ यस्तो लाग्छ, बाटामा गइरहेकी सूर्यमुखीका दुवै पाखुरा समातेर भनूँ- 'सूर्यमुखी, तँ अझै मेरो हृदयको गमलामा ताजै छेस्। नमार् आफ्नो प्रतिभालाई!'
हरिभक्त कटुवालको कथा- सूर्यमुखी
‘बिकनी किलर’को नामबाट प्रख्यात चार्ल्स शोभराज आफ्नो अपराधको कारण जति कुख्यात रुपमा चिनिन्छन् उति नै उनको प्रेम प्रसंगका किस्सा चर्चित छ।
२००७ सालतिरको कुरा हो। काठमाडौंमा प्रवासी नेपाली विद्यार्थी सम्मेलन हुने भयो। रत्ना १० कक्षा पढ्दै थिइन्। स्कुलका कार्यक्रम र पत्रपत्रिकामा सक्रिय थिइन्। उनलाई पनि सम्मेलनमा सामेल गरियो।
प्रेम दिवस : रत्ना र शंकर लामिछानेको अमर प्रेम
वैवाहिक एवम् प्रेम सम्बन्धमा बाँधिएका कलाकार, गायक-गायिकासम्मले आफ्नो प्रेमी-प्रेमिकासँगको फोटो सेयर गर्दै प्रेमिल शब्दमा उनीहरूको बयान गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमा यसरी मनाए सेलिब्रेटीहरूले भ्यालेन्टाइन्स डे !
प्रकाश सपुतदेखि प्रिती आलेसम्म, जसले प्रेम सम्बन्धलाई बिहेमा बदले